Network မှ တစ်ဆင့် ကွန်ပျူတာ မှာ window တင်နည်း - Min Oaker
ဗဟုတုတဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးများ Network မှ တစ်ဆင့် ကွန်ပျူတာ မှာ window တင်နည်း
Network မှ တစ်ဆင့် ကွန်ပျူတာ မှာ window တင်နည်း
by Min Oaker on 10:48 AM in ဗဟုတုတဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးများ
Client Computer တွေသို့Network ပေါ်ကတဆင့် Windows OS Installation လုပ်တဲ့ပုံစံကို မိတ်ဆွေများ အင်းမသိသေးသူများပေါ့လေ သိရလေအောင် Remote Installation Services အကြောင်းကို ပြောပေးပါမယ်
* Windows 2003 or 2000 Server
* Remote Installation Services Component
* Windows XP Professional CD
* PXE Client တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
အထက်က လိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ RIS လုပ်ငန်း စတင်လို့ ရပါပြီ။
Windows Server 2003 or 2000 တွင်ပြုလုပ်ရန်။
ပထမဦးဆုံး Remote Installation Services ဆိုတဲ့ Windows Component တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပေးရပါမယ် ဒီလို ထည့်သွင်းလို့ ရဖို့ အတွက် Server 2003 CD or Server 2000CD ခွေကို ကြိုထည့် ထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။လုပ်တဲ့ ပုံစံကတော့ - Start>>>Control Panel>>>Add or Remove Programs အဲဒီထဲကမှ Add/Remove Windows Components ကိုရွေးပါ။ Windows Components Wizard Box လာပါမယ်
Your browser may not support display of this image. အဲဒီထဲကမှ Remote Installation Services ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ Next ကိုနှိပ်ပါ။ Remote Installation Services ကို Install လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ် ပြီးရင် Complete Wizard Box ကျလာပါမည်။ Finish မှာနှိပ်ပါ။ ဒါဆိုလျှင် Remote Installation Services ကို Install လုပ်တာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
ကျွန်တော့်တို့ အခု server 2003 မှာ Remote Installation Services component ကို ထည့်သွင်းပြီးပြီဖြစ်သဖြင့် RIS လုပ်ငန်းကို စတင်လို့ ရပါပြီ။ စတင်အသုံးပြုပုံကတော့ - Start>>>run box ထဲမှာ risetup ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ RIS Setup Wizard box ကျလာပါမယ်
Your browser may not support display of this image. RIS Welcome Screen တွင် RIS installation အပိုင်းပြီးမြောက်ဖို့ အတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြီးလျှင် Next မှာနှိပ်ပါ။
ဒီအဆင့်လေးကတော့ ကိုယ့် server ၏ C: Drive မဟုတ်တဲ့။ တခြား Drive letter D:, E:, စသည့်အပိုင်းတွင် Remoteinstall နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ သိမ်းဖို့ အတွက်နေရာ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ သတ်မှတ်ချင်ပါက Browse တွင်နှိပ်၍သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ Next မှာနှိပ်ပါ။
ဒီအဆင့်ကတော့ အခုဖန်တီးထားတဲ့ RIS ကို Client သို့ ချက်ခြင်းထောက်ပံမှု ပေးမည်၊ မပေးမည်ကို ရွေးချယ်သည့်အပိုင်းပါ။ Next မှာနှိပ်ပါ။
ဒီအဆင့်ကတော့ Client မှာ အသုံးပြုမည့် Windows ခွေရဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးခိုင်းတာပါ။ အဓိက ကတော့ Windows CD ထဲက i386 folder ကို Copy ကူးယူသွားတာပါ။ win xp CD ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကို ပေးပြီးပြီဆိုလျှင် Next မှာ နှိပ်ပါ။
ဒါကတော့ ကိုယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Image အတွက်နာမည်လေးပေးလိုက်တာပါ။ Next မှာနှိပ်ပါ။
ဒီအဆင့််ကတော့ windows image ၏ Descripiton Name ပေးတဲ့့နေရာပါ။ Next မှာနှိပ်ပါ။
ဒီအဆင့်ကတော့နောက်ဆုံး ပြီးဆုံးသွားတဲ့အဆင့်ပါ။ Finish မှာနှိပ်ပါ
ဒါကတော့ရှေ့ မှာချခဲ့တဲ့ settings အတိုင်း Install လုပ်နေတာပါ။
အခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ၏ Remote Installation Services Setup Wizard ကနေ လိုအပ်တာလေးတွေကို remoteinstall folder ဖွဲ့ ပြီး ဖန်တီးခြင်းအဆင့်ပြီးဆုံးလို့ သွားပါပြီ။ Done မှာနှိပ်လိုက်ပါ။
By Min Oaker at 10:48 AM
Labels: ဗဟုတုတဆိုင်ရာ နည်းလမ်းလေးများ